Madoobe iyo Deni oo qaadacay shirka wada-tashiga | KEYDMEDIA ONLINE
Madoobe iyo Deni oo qaadacay shirka wada-tashiga
Shir madaxeedka u dhaxeeya, Dowladda Federaalka Soomaaliya, hoggaamiyaasha Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka,iyo Gobolka Banaadir, ayaaa qarka u saran inuu burburo, kadib markii qaar ka mid ah Madaxda DG, ganafka ku dhufteen ka qeyb galkiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynayaasha Mamullada Puntland iyo Jubbaland, Siciid Cabdullahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam ‘Madoobe’ ayaa ka biya diidsan Ajandaha shirka wada tashiga qaran, waxayna soo jeediyeen in wada hadalka lagu daro guud ahaan tabashooyinka jira.
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo, sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Rooble ‘Rogane’, Madaxda Maamullada Galmudug, HirShabeelle iyo Koofur Galbeed, iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ku sugan Xarunta Xalane, waxaana wali kulanka soo xaadirin Saciid Deni iyo Axmed Madoobe.
Farmaajo iyo kooxda taabacsan ayaa doonaya in shirka looga hadlo kaliya, qodobadii ka soo laabtay heshiiskii doorashada ee la gaaray 17-kii September 2020, iyo isla eegidda soo jeedintii guddigii farsamada ee ku shiray magaalada Baydhabo.
Dhanka kale Madaxda Maamullada Puntland iyo Jubbaland ayaa dhankooda doonaya in Ajandaha shirka lagu daro dhowr qodob oo ay ka mid yihiin;
1 – In Farmaajo uusan shirka ku lahaan wax ka sarreeya doorkiisa Musharxnimo, maadaama ay dhamaatay muddada xil heyntiisii sharciga ahayd.
2 – In Farmaajo saxiiyo waraaq sheegeysa in waqtigiisa ka dhacay, isla markaana uu laalo awooddiisa, sidii uu hore u sameeyay MW Xasan Sheekh Maxamuud.
3 - In Ajandaha shirka lagu daro Amniga Doorashooyinka, oo shaki weyn iyo kala aamin bax ballaaran ka taagan yahay.
4 – In is baddal lagu sameeyo hoggaanka Booliiska Soomaaliya.
5 – In miiska la soo saaro dhacdadii 19-kii Febaraayo, xilkana laga qaado saraakiishii ku lugta lahayd.
6 – In Xukuumadda Xil-gaarsiintu, qaatado doorkeeda hirgalinta doorashooyinka.
7- In dhidibada loo taago guddi heer qaran oo isku dhaf ah kaas oo dalka ka saaraya muddada kala guurka.
Siciid Deni iyo Axmed Madoobe, oo si guud shirka wakiil kaga ah Mucaaradka ayaa doonaya in loo wada-hadlo si daah furan, shirkuna uusan noqon mid quseeya kaliya in la saxiixo, heshiiyo hore loo gaaray.
Waxaa socda dadaaladii ugu danbeeyay oo ay wadaan Wakiillada Beesha Caalamka, kuwaas oo doonaya in uusan fashilmin shirka ay waqtiga badan ku bixiyeen.